हिमालय खबर | गीत–संगीतमै ज्ञान र जीवन निरन्तर बगिरहेको छ : बुद्धिसागर बस्याल
Thursday, 1 October, 2020 | १५ आश्विन २०७७, बिहीबार
प्रकाशित ५ फाल्गुन २०७६, सोमबार | 2020-02-17 08:02:47
नेपालको स्याङ्जा, मालुङगा गाउँमा जन्मिएर स्वदेशदेखि विदेशसम्मको सांगीतिक अनुभव हासिल गरेका बुद्धिसागर बस्याल लोकदोहोरी क्षेत्रमा छुट्टै पहिचान बनाउन सफल गायक मानिन्छन् । एकदशक लोकदोहोरी क्षेत्रमा जमेर अर्को एकदशक ओझेल परेका उनी फेरि गीतसंगीतको क्षेत्रमै समर्पित भएका छन् । आफूलाई थाहा भएदेखि गीत गाउन सुरू गरेको बताउने बस्याल युवादेखि बुढापाकाले रुचाइएका गायकमध्ये एक हुन् । उनले २२ वर्षको उमेरमा गाएको बुढेसकालैमा बोलको गीत आजपर्यन्त उत्तिकै समय सान्दर्भिक र जनजिब्रोमा झुण्डिरहेको पाइन्छ ।
उनले एक दर्जन एल्बम निकालेका छन्, प्रायः सबै गीतले विभिन्न म्युजिक अवार्ड प्राप्त गरेका छन् । उनले कान्तिपुर टेलिभिजनबाट सुरू गरेको लोकगीतको कार्यक्रमबाट लोकदोहोरी क्षेत्र स्थापितमात्र भएन, धेरै कलाकार जन्माउन सार्थक पनि भयो । जो आज लोकदोहोरी क्षेत्रमा स्थापित भएका छन् । यतिमात्रै होइन १४ वर्षे क्यानडा बसाइमा उनले उत्तर अमेरिकामा नेपाल स्थापित गर्ने काम पनि गरेका छन् । आफूलाई ‘सांगीतिक यात्री’ भन्न रुचाउने उनले आफ्नो धर्मसंस्कृति र कलाको माध्यमबाट बुद्धको सन्देश प्रवाहित गर्न सकेकोमा गर्व महसुस गर्छन् । यिनै मूर्धन्य कलाकार बस्याल देशदेशावर घुमेर, अध्ययन गरेर आफ्नै जन्मभूमिमा उत्रिएका छन् । लोकगीतलाई गाउँदेखि सहरसम्म पु¥याउन उनको ठूलो योगदान रहँदै आएको छ । सामाजिक विभेद र समस्याको उजागर गर्दै आवाजविहीनहरुको आवाज मुखरित गर्न र सामाजिक परिवर्तनको अभियानमा लागिपरेका गायक बस्यालसँग हिमालयखबरका नेपाल संयोजक केशव भट्टराईले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
१) गीतसंगीतमा रमिरहेको तपाईं एकाएक अलग हुनु भयो नि ?
– म गीतसंगीतको क्षेत्रबाट अलग भएको छैन । मेरो रगतमा गीतसंगीत बगिरहेकै छ । जहाँ रहे पनि गीतसंगीतप्रतिको मोह घटेको छैन । सागरको पानी बग्दै महासागरमा पुगेजस्तै म पनि केही समय महासागरमा मिसिएको हुँ । गीत–संगीतमै ज्ञान र जीवन निरन्तर बगिरहेको छ ।
२) त्यसो भए गीतसंगीतको क्षेत्रमा तपाईंको पुनरागमन भएको हो ?
– केही वर्ष वैदेशिक यात्रामा पुगे पनि म कहीँ गएको छैन । रुँदै विदेश गएको थिएँ, हाँस्दै फर्किएको छु कुरा यत्तिमात्रै हो । म हिमालको काखबाट कहिल्यै पर भाग्न सक्दिनँ । आफ्नो देशको महŒव थाहा पाउन पनि एकपटक जोकोही विदेश जानैपर्छ । विदेश जानु पलायन हुनु होइन । किनकि पृथ्वी हाम्रै हो । जब चराका लागि कुनै सीमा हुँदैन । पानीका लागि सीमा हुँदैन भने मानिसका लागि पनि सीमाले बाँध्नु उचित होइन । आफ्नो धर्मसंस्कृति र कर्म गर्न छाड्नु हुँदैन । मानिसद्वारा बनाइएका सीमा भत्काउनुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेको मान्छे हुँ म ।
३) गीतसंगीतका दर्शक स्रोतालाई के कोशेली ल्याउनु भएको छ ?
– नेपाली युवाहरु विविध कारण विदेश जान बाध्य छन् । विदेशमोहले समाजमा पारेको प्रभावका कारण सामाजिक सम्बन्ध नबिग्रियोस् भन्ने उद्देश्यले नेपाललाई विश्वसँग जोड्ने अभियानमा छु । केही महिनाअघि परेलीले...बोलको गीत ल्याएको थिएँ । फेरि लाहुरे एल्बममार्फत् दुलहीको मायाले बोलको गीत दर्शक स्रोतामाझ ल्याएको छु । यस्तै माकुरी जाल बुनेको र ज्योति मगरसँग खोलीभित्र पानी चोलीभित्र जवानी... बोलको कलियुग एल्बम पनि ल्याएको छु । दर्शकस्रोताले निकै रुचाउनु भएको छ ।
४) तपाईंको सांगीतिक यात्रा कसरी सुरु भयो ?
–मैले बच्चैदेखि गीत गाउन थालेको हुँ । गाउँमा हुने भजनकीर्तन, चुड्का, रत्यौली, कालीगण्डकीको सेरोफेरोमा हुने रोधी, सोरठी, मादल र गन्धर्वको सारंगीको धूनले मलाई गायक बनाएको हो । मैले सानैमा रुखमा बसेर गीत गाउँदा मेलापात गर्नेहरु मेरा स्रोता हुन्थे । तिनैका प्रेरणा र हौसलाबाटै मभित्रको प्रतिभा प्रष्फुटन हुँदै गयो । चार कक्षामा जिल्लास्तरीय प्रतियोगितामा लक्ष्मी न्यौपानेसँग गीत गाएको थिएँ । त्यतिबेला उत्कृष्ट पुरस्कारस्वरुप पाँच रुपैयाँ पाएको थिएँ ।
पाल्पा तानसेनमा नौ कक्षा पढ्ने बेलामा गन्धर्वसँग चामल दिएर सारंगी सिकेपछि एसएलसी दिएलगत्तै पहिलो एल्बम ‘कपाल कोरेर हितैको मायालु नजाऊ छोडेर’ बोलको गीत गाएको हुँ । त्यस गीतले सांगीतिक क्षेत्रमा लाग्न हौस्याएपछि ‘मुसुक्क हाँसिदेऊ निरमाया जानी बेलैमा’ बोलको अर्को गीत निकालेँ । भाञ्जाबाबु बोलेको पञ्चेबाजा गीत धेरैले रुचाउनुभयो । त्यसपछि बुढेसकालैमा निकालेपछि म लोकदोहोरी क्षेत्रमा स्थापित भएँ । आधुनिक गीततर्फ देउरालीमा हावा चलेको, डाँफे नाचेर फूल कहाँ फुल्छ र हाँगै भाँचेर लोकदोहोरी गीत पनि निकै रुचाइए । छमछम पाउजुले बोलको गीतपछि म संगीत र चलचित्र निर्माणसम्बन्धी विषयमा अध्ययनका लागि क्यानडा पुगेँ ।
५) लोकदोहोरी क्षेत्रमा कति कलाकार जन्माउनुभयो ?
– कलाकार कसैले जन्माउनेभन्दा पनि मार्गदर्शन गर्ने प्रमुख कुरा हो । थुप्रै भाइबहिनी गीतसंगीतका क्षेत्रमा स्थापित भएका छन् । गायकतर्फ मेरो पुस्ताको प्रतिनिधित्व पशुपति शर्मा र रामजी खाँड भाइहरुले गरिरहेका छन् । यस्तै गायिका सिन्धु मल्ल र लक्ष्मी न्यौपानेले पनि छुट्टै पहिचान बनाएका छन् । देवी घर्ती मगरदेखि ज्योति मगरसम्म धेरै कलाकार भाइबहिनीहरु स्थापित भएका छन् । लोकसंगीतमा पनि पुस्तान्तरण हुँदैछ । एउटा घाँसीले भानुभक्त आचार्यलाई आदिकवि बनाइदियो । कसैको एउटा सानो प्रोत्साहनबाट सयौँ सिर्जनाको उजागर हुनसक्छ । जस्तै लोकगीतलाई गाउँदेखि सहरसम्म ल्याउने काम मैले गरेँ । र, संगीतको अर्को संसार बझ्न म क्यानडासम्म पुगेँ ।
६) क्यानडामा रहँदा लोकसंगीतका लागि के गर्नुभयो ?
–म क्यानडा पुगे पनि लोकसंस्कृतिको लागि उत्तरी अमेरिकामा नेपाल स्थापित गर्ने काममा सक्रिय रहेँ । पहिलो त क्यानडामा बुद्धको सन्देश प्रवाहित गर्दै नेपाल सगरमाथाको देश र ज्ञानभूमि हो भन्ने सन्देश फैलाउन सकियो । नेपाल भनेको भारतकै अंग हो भन्ने बुझाइ हटाउन पनि मेरो वैदेशिक बसाइ अर्थपूर्ण बन्यो ।
७) गीतसंगीतको माध्यमबाट के परिवर्तन ल्याएँजस्तो लाग्छ ?
–पत्रकारिताजस्तै गीतसंगीत पनि समाज परिवर्तनको प्रभावकारी माध्यम हुनसक्छ । मैले लाहुरे एल्बम निकाल्दा छायांकनको क्रममा त्रिशूली नदी किनारमा ट्युबको माध्यमबाट नदी तरेर विद्यालय जाँदै गरेका चेपाङ बालबालिकाको नियति चित्रण गरेको थिएँ । त्यही भिडियोले त्यहाँका मानिसको कथा उजागर भयो । त्यसपछि मूलधारका ब्रोडसिट अखबारले यही समस्याको बारेमा समाचार रिपोर्ट बनाए । त्यसपछि सरकारको ध्यानाकर्षणमात्र भएन, तुइन हटाएर पुल बनाउने अभियान नै सञ्चालन भयो । अहिले देशैभरि तुइन विस्थापित गर्ने सरकारको योजना बनेको छ । समस्या उजागर गर्न लोकसंगीत एउटा माध्यम बन्न सक्छ भन्ने एउटा दृष्टान्त हो यो । गीतसंगीतले समाजका कथा भन्न सक्नुपर्छ, समाजमा एउटा सन्देश फैलाउन सक्नुपर्छ । यो परिवर्तनका लागि सशक्त माध्यम हुनसक्छ ।
८) जीवनसँग संगीतको के सम्बन्ध छ ?
–जीवनसँग संगीतको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । सृष्टिकर्ता भगवान् शिवको हातमा डमरु, भगवान् कृष्णको हातमा बाँसुरी र विद्याकी देवी सरस्वतीको हातमा विणा हेर्दा नै पुष्टि हुन्छ कि जीवनसँग संगीतको कति अर्थपूर्ण सम्बन्ध रहेछ भन्ने । गीतसंगीत नभए जीवन कति बिरसिलो हुन्थ्यो होला ? संसार नै कस्तो भइसक्थ्योे ? कतिवटा युद्ध भइसक्थे होला ? सयौँ मानिसलाई एकैठाउँमा भुलाउने, झुलाउने र शान्त बनाउने शक्ति गीतसंगीतमा हुन्छ । त्यसैले जीवनमा गीतसंगीतको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तै हुनेगर्छ ।
९) पहिले र अहिले लोकदोहोरी क्षेत्रमा के फरक महसुस गर्नुभएको छ ?
–समय परिवर्तनशील छ । प्रविधिको विकासका कारण लोकदोहोरी क्षेत्रमा पनि निकै परिवर्तन देखापरेको छ । नेपालको सांगीतिक क्षेत्रमा पनि पश्चिमी प्रभाव परिसकेको छ । लोकदोहोरी व्याटल, रिमिक्सआदि पश्चिमा संगीतको फ्युजन हुनथालेको छ । पछिल्लो जेनेरेशनको यस्ता संगीतप्रति बढ्दो रुचि छ । संसार खुला भएको संकेत पनि हो यो । समयअनुसार लोकसंगीतमा पनि नयाँपन आएको छ । तर, अलि छाडापन बढेको अनुभूतिचाहिँ गरेको छु । संग्लो पानीमा धमिलो पानी पनि मिसिएको हुन्छ ।
नयाँ जेनेरेशन अलि बेहोसी छ । उनीहरुलाई बुझाउन सक्ने नेतृत्व चाहिएको छ । संगीतका माध्यमबाट संसार जोड्न नेपालमै अथाह चिजहरुलाई प्रस्तुत गर्नसक्नुपर्छ । मध्यपूर्वमा बालुवामुनि तेल र ग्यासको अथाह भण्डार भएजस्तै बुद्धको ज्ञानभूमि र सगरमाथाको हाम्रो देशमा प्राकृतिक रुपमै संसारलाई मोहित गर्ने अथाह सम्पदा छन् । नयाँपुस्ताले गीतसंगीतको क्षेत्रबाट यस्ता विषयहरुको उठान गरी संसार जोड्ने काम गर्नुपर्छ ।
कक्षा १२ को परीक्षाको विकल्पसहित प्रस्तावबारे निर्णय गर्न ढिलाइ
नेकपा उपाध्यक्ष गौतमको मुद्दा ‘हेर्दाहर्दै’ मा शुक्रबार तोकियो
विकासोन्मुख राष्ट्रलाई वित्तीय सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको आह्वान
हरिबोल भण्डारी, केन्द्रीय सदस्य, नेपाली जनसम्पर्क समिति, अमेरिका वैशाख १२ गतेको भूकम्पलगत्तै पीडितहरूको राहतका लागि नेपाल आउनुभयो, यहाँ आएर के–के गर्नुभयो ? वैशाख १२ को भूकम्प ...
जापानका लागि नेपाली राजदूत डा.मदनकुमार भट्टराई, महाभूकम्प पछि नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार तथा राहत कोषमा सवैभन्दा वढी रकम सहयोग जुटाउने राजदूतमा पर्नुहुन्छ । विगत तीन वर्षयता आफन ...
भिम रावलसंग गरिएको कुराकानी
Actress Rekha Thapa in Rishi Dhamal's Show
Rekha Thapa isaNepali actress and film maker. She wasatop ten finalist for Miss Nepal in 1999. Two years later she made her movie debut in Chhabiraj Ojha's Hero. She has worked in around 20 ...